लोकमान माथीको महाअभीयोग नितीगत भ्रष्टाचार हो - Ek Jamarko
Home / विचार / लोकमान माथीको महाअभीयोग नितीगत भ्रष्टाचार हो
लोकमान माथीको महाअभीयोग नितीगत भ्रष्टाचार हो
लोकमानका पक्षमा ~ दुर्गा पंगेनी ।
के लोकमान ले भ्रष्टाचार गर्दै नगरेका मान्छे लाई समेत पत्र काटेका थिए ? के अदुअआले भ्रष्टाचार गर्ने सम्भावना नै नभएका कर्मचारी हरुलाई समेत छानविन गरेको थियो ? पक्कै थिएनन !! लोकमान अलिकती आक्रमक पक्कै थिए । कतै कतै थोरै पुर्वाग्रही समेत देखीएहोलान तर उनले निर्दोष लाई कारवाही पक्कै गरेका थिएनन ।
लोकमानले कार्य क्षेत्र बाहीर निस्केर भ्रष्टचारको छानविन गरेहोलान त्यो मान्न सकीन्छ ! सरकारी कर्मचारी हरुले गरेको भ्रष्टाचार मात्र छानविन गर्न र मुद्दा चलाउन पाउने अदुअआ ले दायरा भन्दा अलीकती बाहिर निस्केर मेडीकल माफीया र लडाकु समायोजन मा भएको भ्रष्टाचारको छानविन थाल्नु नियम संगत नहोला तर त्यहा भ्रष्टाचार भएकै थिएन भन्न सकीन्न !
अलिकती तानासाह नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असम्भव नै हुन्छ !! शिर्ष नेताहरु द्वारा आफु डामीने डरले लोकमान माथी महाअभीयोग प्रस्ताव ल्याउनु पनि अर्को नितीगत भ्रष्टाचार हो ।
हिजो महाअभीयोग को पक्षमा देखीएका प्रचण्ड रातारात आफुलाई जानकारी नै नभएको अभीब्यक्ती दिईरहेका छन । महाअभीयोगको बारेमा हिजो सम्म मौन देखीएका गगन थापा अव महाअभीयोग को नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्छ भनिरहेछन । यस्तो परिवर्तन कसरी सम्भव भयो प्रश्न अचम्भीत पार्ने खालको छ ।
संसद को बैठक तिन दिनको लागी रोकीएको छ । संवेदनसील समयमा आएर बैठक लामो समयको लागी रोकीनु पनि शंकास्पद देखीएको छ ।
महाअभीयोग प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रयोग गरिएको हस्ताक्षर नै फर्जी थिए भन्ने गुनासा हरु बाहीर आईरहेछन । अरु कुनै प्रयोजनको लागी संकलन गरिएको हस्ताक्षर लोकमान का विरुद्द प्रयोग हुनु अर्को दुर्भाग्य हो । लडाकु शिवीर भित्रको भ्रष्चाचार छानविन भएमा तत्कालीन कमाण्डर प्रभाकर सोझै भ्रष्टाचार मुद्दामा तानीने भएकोले उनैले लोकमान लाई फसाउन सांसद हरुले अन्यत्र गरेको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर लोकमान जहाजमै भएको समयमा निलंबन मा पारे ।
लोकमानको मुद्दा अदालतमा चलिरहेको छ । अदालतमा मुद्दा छिनेफानो हुने प्रकृया मा हुदाहुदै त्यो फैसला नपर्खी महाअभीयोग लगाउने हतारो कीन गरीयो ? त्यो एक प्रकारको अदालतको अपमान या मानहानी समेत हुन जान्छ । विदेश बाट फर्केर लोकमानले काम सुरु गरेको भए केही घण्टा भित्रै थुप्रै माओवादी नेता हरु वयान दिनको लागी अख्तियार पुग्नुपर्थ्यो अथवा कतिपयको गीरफ्तारी पनि हुनसक्थ्यो । आफु माथी आईपर्ने सम्भावित खतरा टार्न लोकमान माथी महाअभीयोग दर्ता गरिनु उनी माथीको अन्याय हो ।
लोकमान दोषी देखीए अदालत ले प्रमाणीत गर्न सक्छ कारवाही पनि गर्न सक्छ त्यो बाटो लाई नजरअंदाज गर्दै महाअभीयोग प्रस्ताव दर्ता गरिनु खेदजनक छ ।
लोकमान माथीको महाअभीयोग नितीगत भ्रष्टाचार हो Reviewed by Jamarko TV on अक्तूबर 20, 2016 Rating: 5